Iwu na Iwu - International Writing Centers Association
Mkpakọrịta Iwu Iwu ahụ dị site na ịpị Writlọ Ọrụ Na-ede Akwụkwọ Ọchịchị Mba Nile.
Iwu Associations dị site na ịpị Iwu Njikọ nke International Writing Center.
Nkeji edemede XNUMX: Aha na ebumnuche
Nkebi nke 1: Aha nzukọ ahụ ga - abụ International Writers Centers Association, nke a na - akpọ IWCA ma mechaa.
Nkebi nke 2: Dị ka nzukọ nke National Council of Teachers of English (NCTE), IWCA na-akwado ma na-akwalite agụmakwụkwọ na mmepe ọkachamara nke ebe a na-ede akwụkwọ n'ụzọ ndị a: 1) na-akwado ihe omume na nzukọ; 2) ịga n'ihu mmụta na nyocha; 3) welie odida obodo ọkachamara maka ebe ide ihe.
Nkeji edemede II: Ndị otu
Nkebi 1: Ndị otu ghere oghe nye onye ọ bụla kwụrụ ụgwọ.
Nkebi nke 2: A ga-ahapụta usoro iwu n'ime Iwu.
Nkeji edemede III: ọchịchị: ndị isi
Nkebi 1: Ndị isi ọrụ ga-abụ Onye isi ala gara aga, Onye isi ala, Onye isi oche (onye na-aghọ Onye isi ala na Onye isi ala gara aga na afọ isii), Treasurer, and Secretary.
Nkebi nke 2: A ga-ahọpụta ndị ọrụ dị ka ekwuru na Nkeji edemede VIII.
Nkebi nke 3: Usoro ọrụ ga-amalite ozugbo NCTE Kwa Afọ Mgbakọ na-esote ntuli aka, belụsọ na okwu ahụ mejupụtara ohere (lee Nkeji edemede VIII).
Nkebi nke 4: Usoro nke ọfịs maka onye isi ala-Onye isi ala-Onye isi gara aga ga-abụ afọ abụọ na ụlọ ọrụ ọ bụla, na-enweghị ike imeghari.
Nkebi nke 5: Usoro ọrụ maka odeakwụkwọ na onye nchịkwa ego ga-abụ afọ abụọ, ga-agbanwe.
Nkebi nke 6: Ndị isi agha ga-enwerịrị ndị otu IWCA na ndị NCTE n'oge usoro ọrụ.
Nkebi nke 7: Ọrụ nke ndị isi niile ga-abụ ndị edepụtara na Iwu.
Nkebi nke 8: A ga-ewepụ onye ọrụ ahọpụtara n'ọfịs maka ihe zuru oke na nkwenye nke ndị isi ndị ọzọ na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị Board.
Nkeji edemede IV: Ọchịchị: Board
Nkebi nke 1: Ndị Board ga-enyocha mkpuchi nke ndị otu site na itinye ndị nnọchi anya mpaghara, Nnukwu, na Ndị Pụrụ Iche. A na-ahọpụta ndị nnọchi anya mpaghara (lee Nkebi nke 3); Na Ndị Nnọchite na Nnukwu Ndị Pụrụ Iche a họpụtara dịka akọwapụtara na Bylaws.
Nkebi nke 2: Usoro ndi otu hoputara ga-abụ afọ abụọ, emeghari ohuru. Okwu gha ghagha; iji guzobe ihe eji egwu, enwere ike idozi ogologo okwu nwa oge dịka edepụtara ya na Usoro iwu.
Nkebi nke 3: Ndị mmekọ mpaghara nwere ikike ịhọpụta ma ọ bụ họpụta ndị otu otu onye nnọchi anya mpaghara ha.
Nkebi nke 4: Onye isi ala ga-ahọpụta ndị otu Board na-abụghị ndị ịtụ vootu site na ụlọ ọrụ na-akwadokọ dịka akọwapụtara na Bylaws.
Nkebi nke 5: Ndị otu ọgbakọ ga-enwerịrị ndị otu IWCA n'oge ọrụ.
Nkebi nke 6: Ọrụ nke ndị otu niile, ndị ahọpụtara ma ọ bụ ndị a họpụtara, ka edepụtara na Iwu.
Nkebi nke 7: Enwere ike iwepụ onye otu a họpụtara ahọpụta ma ọ bụ onye ahọpụtara n'ọfịs maka ihe zuru oke na nkwenye nke ndị isi na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị Board.
Nkeji edemede V: Nchịkwa: Kọmitii na Otu Ndị Ọrụ
Nkebi nke 1: A ga-akpọ kọmitii na-anọchi anya ya na Bylaws.
Nkebi nke 2: Ndị isi kọmitii, ndị ọrụ ọrụ, na ndị otu ọrụ ndị ọzọ ga-abụ ndị Onye isi ala ga-enye ọrụ, ndị ọrụ ga-eme ma bo ya ebubo.
Nkeji edemede VI: Nzukọ na ihe omume
Nkebi 1: N'okpuru nduzi nke Kọmitii Mgbakọ ahụ, IWCA ga-akwado nkwado mmemme ọkachamara mgbe niile dị ka akọwapụtara na Bylaws.
Nkebi nke 2: Ndị nlekọta ga-ekwenye na ndị ọbịa wee họrọ ya dịka usoro edepụtara na Iwu; mmekọrịta dị n'etiti ndị ụsụụ ndị agha na IWCA ga-akọwapụta ya na Bylaws.
Nkebi nke 3: Nzukọ Ezumezu nke ndị otu ga-eme na Mgbakọ IWCA. N'ebe enwere ike, IWCA ga-enwe nzukọ a na-emeghe na CCCC na NCTE. Nzukọ ndị ọzọ niile nwere ike ịme site na mkpebi nke Board.
Nkebi nke 4: Ndị Board ga-ezukọ kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume mana ọ dịghị ihe na-erughị okpukpu abụọ kwa afọ; A ga-akọwa otu ọnụ ọgụgụ dị ọnụ ọgụgụ nke ndị otu Board, gụnyere opekata mpe ndị isi atọ.
Nkeji edemede VII: otingme ntuli aka
Nkebi nke 1: Ndị otu n’otu n’otu nwere ikike ịtụ vootu maka ndị isi ọrụ, ndị otu a họpụtara ahọpụta, na mmezigharị iwu. Ewezuga otu akọwapụtara ebe ọzọ na Iwu ma ọ bụ Iwu, a ga-achọrọ ọtụtụ ntuli aka nke iwu maka ịme ihe.
Nkebi nke 2: Usoro ntuli aka ga-akọwapụta ya na Bylaws.
Nkeji edemede VIII: Nhọrọ, Ntuli aka, na Ọrụ
Nkebi 1: Onye odeakwụkwọ ga-akpọ maka nhoputa; ndị anamachọihu nwere ike ịhọpụta onwe ha, ma ọ bụ onye otu ọ bụla nwere ike ịhọpụta onye otu ọzọ kwenyere ka a họpụta ya. A ga-eme mgbalị iji hụ na ndị ntuli aka nwere ike ịhọrọ ma ọ dịkarịa ala mmadụ atọ maka ọnọdụ ọ bụla.
Nkebi nke 2: Iji tozuo, ndị ga-enwerịrị ike ịbụ ndị otu IWCA dị mma.
Nkebi nke 3: Usoro ntuli aka ga-akọwapụta ya na Usoro iwu.
Nkebi nke 4: Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ onye isi ala enwee ohere tupu oge eruo, Onye isi ala gara aga ga-arụ ọrụ ahụ ruo oge ntuli aka nke afọ na-esote mgbe enwere ike ịhọpụta Onye isi oche ọhụrụ. N’ime mgbanwe kwa afọ nke ndị ọrụ nchekwa, Onye-isi Nduzi nọdụrụ ọdụ ga-ewere Onye-isi Nduzi, Onye-isi-nduzi Mgbe gara-aga ga-emezue Ndị-isi-nduzi Mgbe Gara-aga Ma-ọbụ ọfịs ahụ ga-apụ na mbara.
Nkebi nke 5: Ọ bụrụ na ọnọdụ onye ọrụ ọ bụla ọzọ nwere ohere tupu oge eruo, ndị isi fọdụrụ ga-eme oge ọhụhụ oge ruo oge ntuli aka nke afọ ọzọ.
Nkebi nke 6: Ọ bụrụ na ọnọdụ ndị nnọchi anya mpaghara enweghị ohere tupu oge eruo, a ga-agwa onye isi oche nke mpaghara ahụ ka ọ họpụta onye nnọchi anya ọhụrụ.
Nkeji edemede IX: Njikọ Regionallọ Ọrụ Ide Ihe Njikọ
Nkebi nke 1: IWCA ghotara dị ka ndị mmekọ ya na ndị otu mpaghara ederede ebe edepụtara na Bylaws.
Nkebi nke 2: Ndị mmekọ nwere ike ịhapụ ọnọdụ mgbakwunye mgbe ọ bụla.
Nkebi nke 3: Mpaghara mpaghara ọhụrụ ndị na-etinye maka ọnọdụ mgbakwunye nwere nkwado nke ndị otu tozuru oke; Edere usoro ntinye na njirisi usoro site na Iwu.
Nkebi nke 4: Ndị mmekọ mpaghara niile nwere ikike ịhọpụta ma ọ bụ ịhọrọ ndị nnọchi anya otu onye nnọchi anya site na mpaghara ha.
Nkebi nke 5: Mpaghara ndị dị mma na-egosi mkpa nwere ike itinye na IWCA maka enyemaka ma ọ bụ nkwado ndị ọzọ maka ọrụ mpaghara dị ka akọwapụtara na Bylaws.
Nkeji edemede X: Mbipụta
Nkebi nke 1: Akwụkwọ Ederede Center bụ akwukwọ gọọmentị nke IWCA; ndị otu nchịkọta akụkọ ahọpụtara wee soro ndị otu a rụọ ọrụ dịka usoro atọrọ na Bylaws.
Nkebi nke 2: The Akwụkwọ edemede Lab bụ akwụkwọ metụtara nke IWCA; ndi editọ ahụ na-arụ ọrụ na Board dịka usoro akọwapụtara na Bylaws.
Nkeji edemede XI: Ego na Mmekọrịta Ego
Nkebi nke 1: Isi mmalite nnata ego gụnyere ego ndị otu na ego sitere na ihe omume IWCA ka enyere nkọwa zuru ezu na Bylaws.
Nkebi nke 2: Enyere ikike ka ndị ọrụ niile bịanye aka na nkwekọrịta ego na ịkwụghachi mmefu na nnọchite nke nzukọ dịka ọnọdụ edepụtara na Bylaws.
Nkebi nke 3: Ego niile na mmefu ga-aza ma kọọrọ site na Treasurer na nrube isi na ụkpụrụ IRS niile metụtara ọnọdụ anaghị akwụ ụgwọ.
Nkebi nke 4: Ọ bụrụ na nzukọ ahụ etisasị, ndị isi ahụ ga-ahụ maka nkesa nke akụ na-agbaso iwu IRS (lee Nkeji edemede XIII, Nkebi nke 5).
Nkeji edemede XII: Iwu na Iwu
Nkebi nke 1: IWCA ga-akwado ma dobe iwu na-akọwapụta ụkpụrụ nke nzukọ yana otu usoro iwu nke na-akọwapụta usoro mmejuputa iwu.
Nkebi nke 2: Mgbanwe nke Iwu ma ọ bụ Iwu nwere ike ịkọwapụta 1) Board; 2) site na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị otu na-aga Nzukọ Nzukọ IWCA; ma ọ bụ 3) site na arịrịọ ndị otu iri abụọ bịanyere aka wee zigara Onye isi ala.
Nkebi nke 3: Ngbanwe nke Iwu ahụ ka etinyere na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ntuli aka iwu nke ndị otu na-eme.
Nkebi nke 4: Nkuchi na mgbanwe nke Iwu na-etinye iwu na ntuli aka nke ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke Board.
Nkebi nke 5: Edere usoro ịtụ vootu na Nkeji edemede VII.
Nkeji edemede XIII: Iwu IRS iji jigide Ọnọdụ Taxtụ Isi
IWCA na ndị mmekọ ya ga-agbaso ihe ndị achọrọ ka ewepu dịka Organizationtù akọwapụtara na ngalaba 501 (c) (3) nke Usoro Ego Abata:
Nkebi nke 1: A haziri nzukọ a naanị maka ọrụ ebere, okpukpe, agụmakwụkwọ, ma ọ bụ ebumnuche sayensị, gụnyere, maka ebumnuche ndị dị otú a, ikesa nkesa maka otu ndị tozuru n'okpuru ngalaba 501 (c) (3) nke Usoro Ego Abata, ma ọ bụ ngalaba kwekọrọ na koodu ụtụ isi gọọmentị ọ bụla n'ọdịnihu.
Nkebi nke 2: Onweghị akụkụ nke ego netiwu nke nzukọ ga-enweta uru, ma ọ bụ kesaa ya na ndị otu ya, ndị nlekọta ya, ndị isi ya, ma ọ bụ ndị ọzọ nwere nzuzo, belụsọ na enyere ndị otu ahụ ikike ma nye ha ike ịkwụ ụgwọ ezi uche maka ọrụ sụgharịrị na ịkwụ ụgwọ na nkesa na-aga n'ihu nke ebumnuche ndị akọwapụtara na ngalaba 1 nke a na isiokwu __1__ nke iwu a.
Nkebi nke 3: Onweghị akụkụ dị ukwuu nke ọrụ nzukọ a ga-ebu mkpọsa, ma ọ bụ ịnwa ịmegharị iwu, nzukọ a agaghị esonye, ​​ma ọ bụ tinye aka na (gụnyere mbipụta ma ọ bụ nkesa nkwupụta) mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla n'aha ma ọ bụ na-emegide onye ọ bụla maka ịzọ ọkwa ọchịchị.
Nkebi nke 4: N'agbanyeghị agbanyeghị usoro ndị ọzọ nke isiokwu a, nzukọ a agaghị arụ ọrụ ọ bụla ọzọ anaghị ekwe ka eburu (a) site na nzukọ anaghị akwụ ụtụ isi gọọmentị etiti n'okpuru ngalaba 501 (c) (3) nke Inweta Ego. Koodu, ma ọ bụ ngalaba kwekọrọ na koodu ụtụ ọ bụla gọọmentị etiti n'ọdịnihu, ma ọ bụ (b) nke nzukọ, onyinye nke a ga-ewepụ n'okpuru ngalaba 170 (c) (2) nke Usoro Ego Mpaghara, ma ọ bụ ngalaba kwekọrọ na ụtụ ọ bụla gọọmentị etiti n'ọdịnihu. koodu.
Nkebi nke 5: Mgbe a gbasasịrị nzukọ a, a ga-ekesa akụ maka otu ma ọ bụ karịa ebumnuche na-enweghị isi na ngalaba 501 (c) (3) nke Usoro Ego, ma ọ bụ ngalaba kwekọrọ na koodu ụtụ ọ bụla gọọmentị etiti n'ọdịnihu a ga-ekesara gọọmentị etiti, ma ọ bụ steeti ma ọ bụ gọọmentị ime obodo, maka nzube ọha. Ihe ọ bụla akụ dị otú a na-ewepụghị nke a ga-ewepụ ya site na Courtlọikpe nke ikike ikike nke ógbè nke isi ụlọ ọrụ nke nzukọ ahụ nọ n'oge ahụ, naanị maka ebumnuche dị otú ahụ ma ọ bụ otu nzukọ ma ọ bụ otu ahụ, dị ka Courtlọikpe kwuru ga-ekpebi, nke a haziri ya ma rụọ ọrụ naanị maka nzube ndị a.